Emirà: Vehivavy Tokantena Ianao Saingy Mbola Te-hanana Zaza Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2015 12:07 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, 日本語, македонски, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, русский, English
Ayesha Albusmait, sy ny zanany vavy, Reem Abdullah Rashid. Albusmait dia iray amin'ireo vehivavy tokantena vitsy, saingy tsy mitsaha-mitombo ao Emirà nisafidy ny hanangana zaza. Sary: Amanda Fisher. Fampiasàna nahazoana alàlana tamin'ny PRI.
Voalohany nivoaka tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra sy tatitra an'onjampeo nataon'i Amanda Fisher ho an'ny The World ity tamin'ny 6 Novambra 2015, ary averina avoaka eto ho ampahany amin'ny fifanekena fifampizaràna votoaty.
Ao anaty ‘villa’ iray malalaka be any an-joron'i Dubai, milalao an-karavoana ao anaty tranolay kely i Reem Abdullah Rashid. Dimy taona izy.
“Tranolain'ny tsiambarateloko ity. Afaka mibitsibitsika eo an-tsofin'i neny ianao — tranolay miafina ity,” hoy izy manazava, arakaraky ny anandramako mampiditra ny vatabeko ho ao anatin'ilay lavaka kely fidirana eo amin'ny lay.
Tao amin'io tranolay io ny renin'i Reem, Ayesha Albusmait, no nilaza tamin-janany vavy ny marina momba ny fifandraisana tsy ara-drazana misy eo amin'ny fianakavian'izy ireo.
“Voamariko avy amin'ireo tantaran'olona Eoropeana sy [ankizy] fa ampiasaina mandrakariva ho an'ny resaka tsiambaratelo ny tranolay, araka izany mba noraisiko koa,” hoy i Albusmait.
Nolazainy an-janany vavy fa manana tsiambaratelo roa izy — ny voalohany dia ny fitiavany azy, ary ny faharoa : “Avy ao am-poko no nahazoako anao, fa tsy tao an-kiboko.”
Albusmait, 49 taona, dia mpialoha làlana ireo vehivavy tokantena, mpiasa matianina, vitsy saingy tsy mitsahatra mitombo, izay nisafidy ny hanangana zaza. Ny Sampan-draharaha ho an'ny Fampandrosoana ny Vondrom-piarahamonina ao Dubai dia manana lisitra 50 fiandry misy fangatahana fananganana napetrak'ireo ray aman-dreny — ny ampahadimin'ireo dia vehivavy Emirati tokantena avokoa.
“Mandrisika ireo reny tokantena aho hiditra amin'ny fananganana toy ny an'ireo fianakaviana. Misy ankizy mila fianakaviana ary misy reny — mila fianakaviana koa izy ireny,” hoy i Albusmait.
Lazain'i Albusmait fa tsy tao anaty fahatongavan-tsainy velively ny hanilika ny fidirana amin'ny fanambadiana; fa dia tonga fotsiny ilay izy. Saingy maniry ny hanana zanaka izy. Fony izy nilaza tamin'i Reem tao anatin'ilay tranolay fa hoe zaza natsangana izy, ambarany fa mora ny nandraisan'ny zanany vavy ilay vaovao.
Kanefa, olana iray sarotra io. Faran'izay mifàka amin'ny fomban-drazana ny kolontsaina Emirati ary tsy dia mahazatra loatra ny hoe ray aman-dreny tokantena, raha mbola mijanona ho olana iray mahabe resaka manerana ny tontolo Miozolmana ny resaka fananganana.
Maro no mino fa “haram,” na zava-boaràra ny fananganana, ho an'ny Islam. Araka ny lazain'i Natana Delong-Bas, mpampianatra mpisolo toerana ao Boston College, sady tonian-dahatsoratry ny “The Oxford Encyclopedia of Islam and Women”, ny fananganana — tahàka ny fakàna ny anaran'ny fianakaviana sy fiheverana azy ho manana zo ho mpandova feno ny fianakaviana — dia tsy azo ekena ho an'ny lalàna Silamo mahazatra.
“Ninoana ny maha-tena zava-dehibe ho an'ilay zaza ny fahafantarany ny ray sy reny ara-nofo niteraka azy, ary ny fahafahany manao dia miverina hijery ny tena lovany ara-pianakaviana marina,” hoy i Delong-Bas. “Saingy ny fifandraisana, izay andraisan'ny fianakaviana iray ny zaza iray ho ao aminy, ny fiahiana azy ireo sy ny fitaizana azy ireny ao an-tokantranony… dia efa ara-tantara ny fisiany tany aloha.”
Ary rehefa manondro an'i Reem ho toy ny zanany i Albusmait, ambarany fa mitàna ny anaran'ny fianakaviana niaviany ara-nofo i Reem.
Natahotra ihany i Albusmait tamin'ny fotoana voalohany nilazàny tamin'ny fianakaviany ny faniriany hanangana zaza, saingy ambarany fa tena nanohana azy izy ireo, na tsy takatry ny sasany tamin'ny havana aza izany tany am-piandohana.
Nanomboka hatreo, niresaka imasom-bahoaka ny dingana nizorany i Albusmait, tamin'ny fanantenana fa hitondra fanampiana ho an'ireo vehivavy hafa maniry ny hanaraka ny diany.
“Na ireo olona manambady aza, tsy miresaka momba ny fananganana zaza. Resahako izy io satria manana hafatra iray ho an'ny fiarahamoniko aho…[ny fananganana] dia zavatra tena manan-danja tokony ho eken'ny fiarahamonina.”